Momba anay - Perfect Display Technology Co., Ltd.
TEKNOLOGY FAMPANDROSOANA Lavorary CO., LTD
Perfect Display Technology Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny 2006 ary nanomboka teo dia lasa mpanamboatra mpamokatra LCD sy vokatra fampiratiana LED, ao anatin'izany ny fanaraha-maso Gaming, mpanara-maso CCTV, mpanara-maso an'ny besinimaro, solosaina PC rehetra, Digital Signage ary Taratasy fotsy. Miaraka amin'ny orinasa 15000 m2, tsipika famokarana 2 mandeha ho azy sy 1 an-tanana dia manana zana-pamokarana tapitrisa tapitrisa isan-taona isika. Noho ny fanitarana mitohy dia tsy ho ela isika dia hifindra any amin'ny orinasa vaovao lehibe kokoa, mampitombo ny fahafaha-manana maherin'ny roa tapitrisa isan-taona
Nandany vola be tamin'ny vola azontsika tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana izahay ary matoky izahay fa manome ny sasany amin'ireo mpanara-maso tsara indrindra sy vokatra aseho an'izao tontolo izao. Miezaka hatrany izahay manavao sy manadio ny fanolorana vokatra, miaraka amina vokatra vaovao atolotra tsy tapaka. Ireo manam-pahaizana momba ny R&D za-draharaha dia miasa tsy tapaka amin'ny famolavolana vokatra ilainao sy tadiavin'ny mpanjifa. Manolotra serivisy OEM sy ODM feno ihany koa izahay, koa raha mila vokatra manokana ianao dia matoky izahay fa afaka mamolavola sy manamboatra azy ho anao.
Mirehareha amin'ny tenanay fa tsy isika no mora indrindra eny an-tsena satria mino izahay fa tokony hanangana na hamokatra hatramin'ny kalitao fa tsy hidina amin'ny vidiny! Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia tsy mampiasa afa-tsy ireo akora tsara faran'izay tsara kalitao isika, manomboka amin'ny takelaka hatrany amin'ny resistors.
Ny orinasanay dia nahatratra ny fenitra ISO farany, ao anatin'izany ny ISO9001: 2015 sy ISO14001: 2015, mba hahafahanao miara-miasa aminay amin-toky. Ankoatr'izay, ny vokatra rehetra ananantsika dia manana mari-pahaizana CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, WEEE ary Energy Star, ary ny mari-pahaizana UL dia misy vidiny.
Ny filozofianay momba ny asa aman-draharaha dia mifototra amin'ny fitsipika fototra 4 - Fahamendrehana, fanavaozana, kalitao ary serivisy
Ny tanjonay dia ny ho tonga mpanamboatra vokatra fampirantiana eto amin'izao tontolo izao, ary mino izahay fa eo an-dàlana hahatratra an'io tanjona io.